dugsiga - ALinks
Maqaallada ku saabsan dugsiga
Nidaamka Iskuulka iyo Waxbarashada ee Kanada
December 26, 2020 Antika Kumari Canada, dugsiga
Kanada waxay ka mid tahay waddamada ugu aqoonta wanaagsan adduunka. Sanadkii 2015, 90% dadka Kanada ee da'doodu u dhaxayso 25 illaa 64 ayaa dhammeeyay dugsigooda sare, iyo 66% waxay heleen waxbarasho dugsi sare ah. Nidaamka waxbarashada
Iskuulka & Waxbarshada Mareykanka Mareykanka
April 1, 2020 Shubham Sharma dugsiga, USA
Dalka Mareykanka waa mid aad u dadku aad u badan. Waxay leedahay wadar ahaan 50 dawladood. USA sidoo kale waa wadan kafiican uguna wanagsan in lashaqeeyo, madaama ay leedahay qaar kamid ah shirkadaha ugu sumcadda badan dunida. Haddii qof
February 29, 2020 Antika Kumari Mexico, dugsiga
Haddii aad ula guureyso Mexico qoyskaaga, go'aanka muhiimka ah ee aad wajihi doonto waa sida loo sii wado waxbarashada carruurtaada. Dugsiga iyo Nidaamka Waxbarshada ee Mexico waxaa laga yaabaa inuusan lahayn iskuulada dadweynaha ee ugu xoogan ee la heli karo. Laakiin waxaa jira noocyo kala duwan
Nidaamka Waxbarashada Afgaanistaan ​​& Liiska Dugsiyada Caalamiga ah ee Kabul
February 29, 2020 Maitri Jha Afghanistan, dugsiga
Haddii aad qorsheynaysid inaad u guurto Afgaanistaan ​​adiga iyo reerkaagaba waa inaad hubisaa nidaamka waxbarasho ee Afghanistan. Maqaalkan, waxaan kaga wada hadli doonaa nidaamka iskuullada iyo nidaamka waxbarasho ee Afghanistan. Afgaanistaan ​​ayaa ka mid ah waddamada ugu hooseeya